Chiziviso chitsva cheApple Watch Series 2 | Ndinobva mac
Chiziviso chitsva cheApple Watch Series 2
Maawa mashoma apfuura, ndakakuratidza mune yangu yapfuura chinyorwa izvo zvitatu zvitsva kushambadza izvo Apple zvakatumira pane yayo YouTube peji kusimudzira AirPods, idzo dzisina waya dzenhare idzo vashandisi veApple vanga vakamirira kwemwedzi yakawanda kudaro. MaAirPod akarova musika anenge mwedzi miviri mushure mekutanga kwavo musi wekutanga uye kunyangwe hazvo iwo asiri kuwanikwa mune chero Apple Chitoro pasirese, vakomana vanobva kuCupertino havasi kurasikirwa nemukana wekuenderera mberi nekuvasimudzira. Asi handicho chete chiziviso chitsva chatinogona kuona paApple YouTube peji, sezvo Apple yakatumirawo vhidhiyo nyowani, ino nguva inoenderana neApple Watch Series 2.
Ichi chiziviso chitsva chinotiratidza mhete dzakasiyana dzinotiratidza zviitiko zvatinoita zuva nezuva uye izvo Apple Watch yedu inounganidza. Mhete idzi dzinotizivisa nezvenguva yatange takamira, tichifamba kana kudzidzira. Inofanira kuyeukwa, iyo Apple Watch inotiyeuchidza awa yega yega kuti isu tinofanirwa kusimuka kubva pachigaro kuti tifambe nekuti tave munzvimbo imwechete kwenguva yakareba. Neraki, zvinoenderana nekuti unozvitarisa sei, iyo Apple Watch haitiratidze ruzivo nezve huwandu hwemaawa atinopedza takagara zuva rega regaPamusoro pevanhu vese avo, nerombo rakanaka kana zvinosuwisa, vanoshandisa komputa kwakawanda ezuva.
Mavhidhiyo ese arikuburitswa neApple ane chekuita neApple Watch, gara uchitiratidza iyo Series 2 modhi, mudziyo usina mvura uine GPS yakabatana, uchisiya zvimiro zveZviteedzana 1 nezvakatanga, sekunge hazvisi zvepamusoro. kutengesa kana sekunge vaive vasina basa semuenzaniso seiyo Series 2, modhi inovavarira kunyanya kune vese vashandisi vanoita zvemitambo zuva nezuva mune akasiyana mamiriro, angave emamiriro ekunze kana ane hukama nemvura, sekushambira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Chiziviso chitsva cheApple Watch Series 2
Sarudza kwaunoda kurodha pasi maGoogle Chrome mafaera paMac
Apple inotangisa zvitatu zvitsva zveAirPods